Bayaanka qarsoodiga (Personvernspolise) - NOMKUS
Bayaanka qarsoodiga (Personvernspolise)
Waxaan nahay Xarunta Dhaqamada Kala-duwan ee Norway, websaydkayaguna waa: https://nomkus.com. Waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa iimaylka: benita@nomkus.no
Xogta shakhsiyeed ee aanu ururinayno iyo sababta aanu u ururinayno
Marka martida ay faallooyinka kaga tagaan mareegahayaga, waxaanu ururin doonaa macluumaadka lagu soo gudbiyay foomka faallooyinka, iyo sidoo kale cinwaanka IP-ga martida iyo xadhigga wakiilka isticmaale browserka si ay nooga caawiyaan inaan ogaano spamka iyo spamka.
Silsilad calaamad qarsoodi ah oo ka socota ciwaanka emailkaaga (sidoo kale loo yaqaan “hash”) ayaa laga yaabaa in la siiyo adeega Gravatar si loo hubiyo inaad isticmaalayso adeega. Siyaasadda Khaaska ah ee Adeegga Gravatar ayaa laga heli karaa halkan: https://automattic.com/privacy/. Kadib ansixinta faalladaada, sawirkaaga astaanta guud ayaa si guud loo heli doonaa marka la eego faallooyinkaaga.
Haddii aad sawirro ku dhejiso shabakadeena, waa inaad iska ilaalisaa inaad geliso sawirada xogta goobta ku dhex dhisan (EXIF GPS) ku jirto. Soo-booqdayaasha mareegaha ayaa soo dejisan kara oo ka heli kara dhammaan noocyada xogta goobta ee sawirada mareegaha.
Haddii aad nagula soo xidhiidho mid ka mid ah foomamkayaga xidhiidhka, waxaanu kaydin doonaa macluumaadka soo socda:
Dhammaan macluumaadka aad ku bixisay foomka
Taariikhda iyo wakhtiga soo gudbinta
Haddii aad ku diiwaan geliso imaanshaha foom mareegahayaga ah (tusaale haddii aad koorasyada dhigato oo aad halkaa iska diwaangeliso), macluumaadka soo socda ayaa la ururin doonaa:
Dhammaan macluumaadka aad ku bixisay foomka (tusaale magaca, iimaylka, degmada)
Haddii aad faallo kaga tagto mareegahayaga, waxaad dooran kartaa inaad kaydiso magacaaga, cinwaankaaga iimaylka iyo bogga internetka adigoo isticmaalaya cookies. Tani waa si ay kuugu habboonaato si aadan u buuxin isla macluumaadkaas mar kale markaad faallo cusub soo dhejiso. Buskudyadani waxay socon doonaan hal sano.
Haddii aad booqato boggaga galitaanka, waxaanu dejin doonaa buskud ku meel gaar ah si loo hubiyo haddii browserkaagu aqbalayo cookies. Buskudkani ma jiro xog gaar ah oo waa la tuurayaa marka aad xidhid barowsarkaaga.
Markaad gasho, waxaanu sidoo kale dejin doonaa cookies-ka si aan u kaydiyo macluumaadkaaga galitaanka iyo fursadahaaga daawashada. Kukiyada soo gal waxay ku dhamaanayaan laba maalmood, iyo kukiyada xulashada shaashadda waxay socotaa hal sano. Haddii aad doorato “I xasuuso” waxaad ahaan doontaa gudaha gudaha ilaa laba toddobaad. Haddii aad ka baxdo akoonkaaga isticmaale, buskudka galitaanka waa laga saarayaa.
Waxyaabaha lagu dhex dhisay shabakadaha kale
Maqaallada ku jira mareegahan waxa laga yaabaa inay ka koobnaan karaan nuxur (tusaale muuqaal, sawirro, maqaallo, iwm..). Xogta ku duugan ee shabakadaha kale waxay u dhaqmaan si la mid ah haddii booqdehu uu booqday bogga asalka ah ee nuxurka (tusaale, haddii aad daawato muuqaal ku guntan YouTube).
Websaydhyadani waxa laga yaabaa inay ururiyaan macluumaadka adiga kugu saabsan, isticmaalaan cookies, ku daraan daba-galka dhinac saddexaad oo dheeraad ah, oo ay la socdaan sida aad ula falgasho macluumaadka ku dhex jira, oo ay ku jirto la socodka hawlgelintaada macluumaadka ku dhex jira haddii aad leedahay akoon isticmaale iyaga oo aad gasho. hudheel.
Cidda aan la wadaagno macluumaadkaaga
Haddii aad ka qaybgasho mid ama in ka badan oo ka mid ah koorsooyinkayada onlaynka ah, waxa laga yaabaa in aanu macluumaadkaaga u gudbino ururka ama degmada kuu soo dirtay koorsada. Macluumaadka aanu dirno waxa ku jiri kara magacaaga, e-mailkaaga, macluumaadka kale ee la gudbiyay, iyo sidoo kale taariikhda iyo wakhtiga laga bilaabo markii aad diiwaan galisay imaanshahaaga.
Ilaa intee ayaan haynaa macluumaadkaaga
Haddii aad faallo ka tagto, faallada iyo xogteeda meta waxa loo kaydin doonaa si aan xad lahayn. Tani waa si aan u aqoonsano oo aan u aqbalno faallooyinka daba-galka ah si toos ah intii aan safka gelin lahayn dhexdhexaadin.
Isticmaalayaasha iska diiwaangeliya mareegahayaga, waxaanu sidoo kale ku kaydin doonaa macluumaadka shakhsiyeed ee ay bixiyaan profile isticmaalkooda. Dhammaan isticmaalayaashu way arki karaan, wax ka beddeli karaan oo tirtiri karaan macluumaadkooda khaaska ah wakhti kasta (marka laga reebo isticmaalayaasha, tan lama beddeli karo). Maamulayaasha mareegaha ayaa waliba arki kara oo wax ka beddeli kara macluumaadkan.
Waa maxay xuquuqda aad ku leedahay xogtaada
Haddii aad leedahay akoon isticmaale oo ku yaal boggan, ama aad faallooyinka ka tagtay, markaa waxaad soo diri kartaa codsi aad ku hesho faylka la dhoofiyay ee macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa aruurineyno adiga, oo ay ku jiraan dhammaan xogta aad na siisay. Waxa kale oo aad codsan kartaa in aan tirtirno dhammaan macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aan ku kaydinnay adiga. Tan kuma jiraan macluumaadka nalooga baahan yahay inaan xafidno maamul, sharci iyo / ama sababo ammaan dartood.
Halka aanu ku dirno xogtaada
Faallooyinka isticmaalayaasha waxaa lagu soo diri karaa adeegga hubinta spamka ee tooska ah.
Haddii aad soo gudbiso codsi ama aad nagula soo xidhiidho e-mail, waxaanu isticmaali doonaa macluumaadkaaga xidhiidhka ee aad bixisay si aan uga jawaabno su’aalahaaga.